Fiaramanidina manerantany amin'ny krizy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Fiaramanidina manerantany amin'ny krizy
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny sidina manerantany dia nokapohina ary ny fifamoivoizana an'habakabaka dia miorim-paka hatrany satria ny firenena dia manery ny fikatonany sy mametra ny fivezivezena, miaraka amin'ny fambara vitsivitsy izay efa hita ny farany. Ho an'ny mpitatitra lehibe indrindra toa ny IAG, United, American Airlines, Emirates, Lufthansa ary maro hafa (jereo ny famintinana etsy ambany) rehetra dia voatery nangataka fanampiana tamin'ny governemantany.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany lehibe - izay matetika no mpamily ny fanarenana ara-toekarena ny firenena iray taorian'ny krizy taloha, dia maniry ny hahita indray ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena aorian'ny ASAP. Ny orinasam-pizahan-tany izay miteraka 10.3 isan-jaton'ny GNP manerantany dia miahiahy ny hanombohana ny dia indray.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina aorinan'ny korona dia hanana endrika hafa mihitsy. Ireo izay tafavoaka velona dia hivoatra ho lasa orinasa kely mahia sy ambany trosa ary mety navoakan'ny governemanta. Ny mpandinika fiaramanidina sasany dia maminavina fa ny COVID-19 dia hamela ny indostria ho potika ary amin'ny faran'ny Mey 2020 dia ho bankirompitra ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'izao tontolo izao. Ny mpandinika CAPA dia nitatitra izany ihany koa, ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mety bankirompitra amin'ny faran'ny volana Mey raha tsy miverina haingana ny raharaha.
Vahaolana iray mety aroson'izy ireo ny hanafoanana ny lalàna mifehy ny fananana ary hamela ny indostria hiditra ho marika manerantany.
Ny korontana aorian'ny korona dia manolotra fotoana tsy fahita firy hamerenana ireo trano fananganana indostrian'ny seranam-piaramanidina manerantany.
Ny fipoahana avy amin'ny krizy dia ho toy ny fidirana amin'ny ady izay tototry ny fahavoazana. Misokatra ny sehatra ho an'ny mpanao lalàna sy ny tsena ara-bola mba hanao ny takian'izy ireo manokana amin'ny indostria iray izay efa manana lisitra lava - maniry ny lisitry ny fomba tokony hitondrany ny mpanjifa tsaratsara kokoa, hampihena ny dian-tongotr'izy ireo ary hampihatra fomba fanao maharitra.
Rehefa mihanaka erak'izao tontolo izao ny fiantraikan'ny virus corona dia maro ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka efa voatosika any amin'ny fatiantoka ara-teknika. Hitanay fa mihazakazaka midina haingana ny tahiry vola satria miorina amin'ny tany ny fiaramanidina. Ny famandrihana mialoha dia be lavitra noho ny fanafoanana ary isaky ny misy tolo-kevitra vaovao avy amin'ny governemanta dia tokony hanakivy ny sidina sy ny dia.
Ny vinavinan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) farany dia ny fahitan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana 55% amin'ny 2020 raha ampitahaina amin'ny 2019 ary 89 tapitrisa miliara ny fatiantoka azo amin'izany Ny fikambanana dia namerina ny faminaniany momba ny fatiantoka $ 76 miliara natao tamin'ny volana martsa satria ny fiantraikan'ny valanaretina virus corona manerantany amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mitohy hatrany amin'ny ambaratonga mbola tsy nisy toa azy.
Nisy fihenan'ny 90 isan-jato ny fangatahan'ny faritra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary ny IATA dia nanondro ny fampidirana ny fameperana ny dia manerana an'izao tontolo izao izay mametra ny fihetsiketsehana fotsiny amin'ny fivezivezena tena ilaina sy fampodiana ny olom-pirenena any amin'ny firenena niaviany ho "misy akony lehibe kokoa noho ny nandrasana teo aloha . "
Maro ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana no nampiato ny asan'ny mpandeha miaraka amin'ireo mpitatitra roa lehibe indrindra ao amin'ny faritra, easyJet sy Ryanair, tsy manantena sidina hiasa hatramin'ny volana jona.
Manantena ny fiaramanidina hiverina haingana ny sidina, ny mpandeha raharaham-barotra dia mety mandoa inefatra ka hatramin'ny dimy heny amin'ny salan'isa amin'ny sidina mahazatra - ny famerenana azy ireo haingana amin'ny fiaramanidina dia tena zava-dehibe.
Na dia manomboka miverina amin'ny laoniny fahatelo amin'ity taona ity aza ny toekarena, araka ny vinan'ny mpahay toekarena maro, ny tahotra ny virus corona dia mety hitarika fahasitranana miadana satria ny tolona dia mamerina indray ny haavon'ny krizy.
Mety maharitra amam-bolana vao ho velona indray ny seranam-piaramanidina. Raha toa ka mandeha erak'izao tontolo izao ny onja faharoa amin'ny aretina ary mety hisy ny hafanana amin'ny toerana mafana dia mety hampihena ny fahatokisan'ny mpandeha azy io. Ary raha mbola misy ny fikojakojana tena ilaina isan'andro amin'ny fiaramanidina mijanona, izy rehetra dia mila entina miverina amin'ny toe-javatra manidina alohan'ny hametrahana azy ireo amin'ny serivisy.
Ny fangatahana dia maina amin'ny fomba izay mbola tsy nisy toa azy. Ny ara-dalàna vaovao dia mbola tsy tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina.
✈️ Nanaiky ny famoahana $ 61bn $ ho an'ny orinasam-piaramanidina amerikana ny governemanta amerikana satria nitondra ny fiviliana virtoaly ny valanaretina virus corona. Ny fanomezana ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe toy ny amerikanina, Delta, Southwest, JetBlue ary United dia mety ho tonga miaraka amina tadiny.
Tamin'ny 14 aprily 2020 dia namoaka fanadihadiana nohavaozina ny International Air Transport Association (IATA) izay mampiseho fa ny krizy COVID-19 dia hahita ny fidiram-bolan'ny mpandeha an'habakabaka hidina 314 miliara dolara amin'ny taona 2020, fihenan'ny 55% raha oharina amin'ny 2019.
Talohan'izay, ny 24 martsa IATA dia nanombatombana $ 252 miliara ho an'ny vola very (-44% vs. 2019) tamin'ny tranga iray nisy fameperana mafy ny dia nandritra ny telo volana. Ireo tarehimarika nohavaozina dia maneho ny fanamafisana ny krizy nanomboka teo, ary taratra:
1- Fepetra an-trano henjana maharitra telo volana
2- Ferana sasantsasany amin'ny fivezivezena iraisampirenena mihoatra ny telo volana voalohany
3- Fiantraikany mahery vaika manerantany, ao anatin'izany i Afrika sy Amerika Latina (izay kely ny fisian'io aretina io ary antenaina fa tsy hisy fiantraikany firy amin'ny famakafakana ny volana martsa).
Ny fangatahan'ny mpandeha iray taona (anatiny sy iraisam-pirenena) dia andrasana hidina 48% raha oharina amin'ny 2019.
✈️ Ny birao aostralianina dia niditra amin'ny fitantanana an-tsitrapo ny 21 aprily noho ny trosa malemy nampitombo ny fanidiana virus corona. Asa 10,000 farafahakeliny no tandindomin-doza raha mikatona ny kaompaniam-pitaterana. Manana trosa AUS $ 5 miliara (3.2 tapitrisa dolara amerikana) i Virgin ary nangataka fanampiana federaly mba hiasa hatrany saingy nolavin'ny governemanta Morrison ny famoahana $ 1.4 miliara.
✈️ Thai International (THAI) mitovy amin'ny Virgin Australia dia mitady 1.8 miliara dolara amerikana amin'ny famerenam-bola amin'ny governemanta. Tsy tian'ny olona ny fampindramam-bola satria maro no mino fa tsy maintsy tsy hahomby izy io amin'ny fisiany. Ny fahatokisan'ny mpitantana azy sy ny taleny dia nahatratra haavo vaovao niaraka tamin'ny praiminisitra Thai Prayut Chan-ocha sy ny vahoaka. THAI dia tsy maintsy mandefa drafitra fanarenana amin'ny faran'ny volana raha maniry ny governemanta handinika ny fonosana famonjena. Ny minisitry ny fitaterana Saksayam Chidchob no nametraka ny fe-potoana farany tao anatin'izany fiakaran'ny fihetsem-bahoaka izany manoloana ny fampindramambola notohanan'ny fanjakana.
✈️ IAG (orinasan-dray aman-dreny an'ny British Airways) nanambara ny vondrona tamin'ny volana martsa fa hiaro ny renivohitra sy hampihena ny vidiny.
"Nahita fihenam-bidy be dia be izahay manerana ny seranam-piaramanidina anay sy ny tamba-jotra manerantany tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ary manantena izahay fa hihena hatrany ny fangatahana mandra-pahatongan'ny fahavaratra," hoy i CEO Walsh. “Noho izany dia manao fihenan-danja lehibe amin'ny fandaharam-potoananay izahay. Hanohy hanara-maso ny haavon'ny fangatahana izahay ary manana ny fahafaha-manao afaka manapaka lavitra raha ilaina izany. Izahay koa dia mandray andraikitra hampihenana ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola sy hanatsarana ny fikorianan'ny vola isaky ny kaompaniam-pitaterana anay. IAG dia mahazaka tabilao mandanjalanja sy fihoaram-bola mihoampampana. ”
Ny fahaiza-manao ho an'ny volana aprily sy mey dia hahena farafahakeliny 75% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2019. Ny vondrona ihany koa dia hampiakatra ny fiaramanidina ambim-bava, hampihena ary hanemotra ny fandaniana renivohitra, hampihena ny fandaniana IT tsy ilaina sy tsy miankina amin'ny cyber, ary ny fandaniana an-tsitrapo . Ny orinasa dia mikasa ihany koa ny hampihena ny vidin'ny asa amin'ny alàlan'ny fanamontsanana ny fandraisana mpiasa, fampiharana ny safidy fialan-tsasatra an-tsitrapo, fampiatoana vonjimaika ny fifanarahana asa, ary ny fihenan'ny ora fiasana.
✈️ Ny Air Mauritius dia miditra amin'ny fitantanana an-tsitrapo.
✈️ Banky banky afrikanina atsimo. Tamin'ny 5 Desambra 2019, nanambara ny Governemantan'i Afrika atsimo fa hiditra amin'ny fiarovana bankiroporitra i SAA, satria tsy nahitana tombony ny zotram-piaramanidina nanomboka tamin'ny 2011 ary lany vola.
✈️ Mamerina fiaramanidina 12 i Finnair ary mametraka olona 2,400.
✈️ Miaraka amin'ny fiaramanidina 22 ianao ary mandoro olona 4,100.
✈️ Ryanair dia manana fiaramanidina miisa 113 ary manary mpanamory fiaramanidina 900 amin'izao fotoana izao, 450 hafa amin'ny volana ho avy.
✈️ Nosakanan'ny Norveziana tanteraka ny asany lavitra !!! Ny 787 dia tafaverina amin'ny mpampindram-bola.
✈️ SAS dia namerina fiaramanidina 14 ary nandrehitra mpanamory fiaramanidina 520… Mandinika drafitra hanafoanana ny norveziana sy ny SAS hanangana orinasa vaovao amin'ny lavenon'izy ireo ny fanjakana Skandinavianina.
✈️ IAG (British Airways) manana fiaramanidina 34. Ny olona mihoatra ny 58 taona hisotro ronono.
✈️ Ethiad dia manafoana ny kaomandy 18 ho an'ny A350, ny tany 10 A380 ary ny 10 Boeing 787. Manala mpiasa 720.
✈️ Ny Emirates dia manana A38 380 ary manafoana ny baiko rehetra amin'ny fiaramanidina Boeing 777x (150, kaody lehibe indrindra amin'ity karazana ity). "Manasa" ny mpiasa rehetra mihoatra ny 56 izy ireo hisotro ronono
✈️ Namerina A32 320 i Wizzair ary namela olona 1,200 200, ao anatin'izany ny mpanamory fiaramanidina 430, onja 30 fandroahana iray hafa kasaina hatao mandritra ny volana ho avy. Ireo mpiasa sisa tavela dia hahita ny karamany XNUMX%.
✈️ IAG (Iberia) dia manana fiaramanidina 56.
✈️ Luxair dia mampihena ny 50 metatra (ary misy fihenam-bidy mifandraika amin'izany)
✈️ CSA dia manafoana ny sehatry ny halavirana lava ary mitazona fiaramanidina antonony 5 fotsiny.
✈️ Midina any amin'ny bankiropitra ny Eurowings
✈️Ny fiaramanidina bruxelles dia mampihena 50% ny fiaramanidina (ary misy fihenam-bidy mifandraika amin'izany).
✈️ Lufthansa, ny governemanta federaly alemà dia nifanaraka tamin'ny fonosana famonjena mitentina 9 miliara (9.74 tapitrisa dolara) ary mikasa ny hampidina fiaramanidina 72.
✈️ Lehiben'ny mpanatanteraka Air France KLM Ben Smith dia nilaza fa ny fihenan-tsitrapo an-tsitrapo dia ho tafiditra ao anatin'ny drafitra fanapahana vidin-tsoratry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany ary ny vidiny amin'ny sandriny 'HOP' dia tsy azo tanterahina rehefa nijoro ny raharaha. Tamin'ny resadresaka natao, ora vitsivitsy taorian'ny nahazoan'ny Air France KLM 7 miliara euro (7.6 miliara dolara) tamin'ny fanampiana avy amin'ny governemanta frantsay, dia nilaza ihany koa izy fa mety maharitra roa taona, na mety “somary lava kokoa aza”, alohan'ny hiverenan'ny raharaha ara-dalàna amin'ny seranam-piaramanidina sy indostrian'ny zotram-piaramanidina.